Antsirabe : Kista 25 kg no nalàna tao an-kibon’ilay ramatoa
Vehivavy iray avy any Miandrivazo I Mija nisy ity kista milanja hatrany amin’ny 25.5 kg ity. Efa 16 taona no nisian’ny fivontosana tao amin’ny kibony, araka ny fitantarany.
Noho izy somary be vatana anefa dia tsy niraharaha loatra ilay fivontosana no sady tsy dia hita loatra ihany koa ilay izy. Tao anatin’ny dimy taona anefa izay no nihanahia izy ka nanomboka hita ilay kibony.
“nihevitra aho fa aretina tsy azo tsaboina amin’ny dokotera izy io, ka tany amin’ny fitsaboana netim-paharazana foana aho no nandeha tsy nahitam-bokatra anefa izany nandritra ny fotoana ela ka izao tapa-kevitra hanatona hopitaly izao ny fianakaviako”, hoy izy.
Niha nihombo ihany koa ilay aretina ary niha reraka hatrany ity vehivavy izay mbola tsy niteraka ity. Tapa-kevitra ny havany fa hitondra azy ao amin’ny hopitaly Loterana ao Andranomadio Antsirabe. “Tamin’ny fizahana natao no nahalalana fa irony kista amin’ny tranon-jaza irony no tao anatin’ny kibon’I Mija”, hoy ireo havany mitantara.
Ny zoma 22 avrily teo no natao ny fandidiana azy ka araka ny filazan’ny Dr Sahalanirina Harsson, izay niandraikitra ny fandidiana azy dia “tsy misy ahiana intsony ny fahasalaman’ity vehivavy ity amin’izao fotoana izao, no sady efa mianatra mandeha ihany koa izy”. Mbola mitohy kosa ny fanaraha-maso azy.
Angola Ny Avo/ Faralala